बेग बिजेता प्रचण्ड !
नेपाली राजनीतिमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आलोचना गर्नेहरूले यो आलेखले भन्न खोजेको सन्देश भेट्टाउन सक्नेछन् । बिरोध मात्र गर्नेहरूका आँखामा ‘फूलो’ परेको हुन सक्छ ।
नेपाली व्यवस्था, राजनीति र आन्दोलनका बेगहरू दिशागत हिसाबमा व्याख्या गर्ने भन्दा पनि घटनाक्रमका आधारमा संश्लेषण हुनुपर्छ । नेपालमा पुष्पलाल श्रेष्ठले स्थापना गरेको कम्युनिस्ट आन्दोलन दरबारमा चढाउने र सत्तामा रुमल्लिनेहरू भन्दा फरक हिसाबले उठाएर पहिलो पटक दुई तिहाई नजिक पुराउन सक्ने र त्यसलाई हाँक्ने ‘नेतृत्व’को सबलताहरूमाथि प्रश्न गर्नु कति उपयुक्त होला ?
यहाँ द्वन्द्वकालमा कति मान्छे मारिए, झापातिर कतिका टाउका काटिए, को जंगलमा कति बर्ष हराए को जेलमा कति समय राजकाज मुद्दामा परे भन्ने सन्दर्भको विल्कुल चर्चा हुनेछैन । राजनीतिको आरोह अवरोहका क्रममा भएका यी सहायक घटनाको पृष्ठभूमीले अहिले सत्तामा ‘नेकपा’ उभिएको छ ।
नेकपामा रहेका सबै नेताका कमजोरी छन । तर राम्रा पक्ष पनि छन् । त्यस मध्ये पनि रफ्तार र बेगको गतिचाहिँ एउटाले मात्र बोकेको छ । र, त्यो नाम हो– प्रचण्ड । शान्ति प्रक्रियायता चर्चामा चलेको नाम हो, पुष्पकमल दाहाल ।
नेकपाको एक तहको विवादको समाधान भर्खर भएको छ । यो विवाद आन्तरिक थियो, चलिरहन्छ । तत्कालका लागि समाधान भए पनि कुनै प्रारूपमा कुनै स्वरुपमा पक्कै पनि उदाउनेछ । त्यो सम्भावित विषयलाई एकछिन थाँती राखी, नेकपा नेतृत्वको चर्चा गर्नु स्वभाविक हुन्छ । नेकपामा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ९केपी० शर्मा ओली र प्रचण्डको संयुक्त नेतृत्वको विकल्प यो दुई नामको सहमति र सहकार्य नै थियो, समझदारी नै थियो । यसको विकल्प थिएन, भएन । तर यी दुई मध्ये पनि सुस्ताएको कम्युनिस्ट आन्दोलन र सत्तामा जनमत निकालेर फुत्तै निकाल्ने हिम्मतको नेतृत्व, त्यागको नेतृत्व प्रचण्डले गरेका हुन, यसमा दुईमत छैन ।
पहिलो संविधानसभामा पहिलो पार्टीको पहिलो नेताका रुपमा स्थापित प्रचण्डको त्यो बेगको गतिलाई भत्काउने, खुम्च्याउने र सडाउने कोसिस संविधानसभाको विफलतासँगै भएको थियो । त्यसलाई ठिक ट्रयाकमा उभ्याएर कम्युनिस्ट गठबन्धन हुँदै एकीकृत केन्द्र बनाएर संवैधानिक, संसदीय व्यवस्थामा उभ्याउनका निम्ति प्रचण्डको ‘प्रथम’ बलिदानलाई नजरअन्दाज गर्नु चलिरहेको राजनीतिक बहसमा अन्याय हुनेछ । किनकी, नेकपाको एउटा कित्ताको लाभमा रमाउनेहरू प्रचण्डलाई ‘दोस्रो’ अध्यक्ष भन्दा, लेख्दा र सुन्दा मात्र होइन, व्यवाहार गर्दा पनि आत्मरतीको रथ चढिनै रहन्छन, यो धरातलको यथार्थ हो ।
नेकपामा चारथरी नेता छन । यो दुईथरी पार्टीको समायोजन थियो, चारथरी नेताको महत्वकांक्षाको शिकार बनिरहेको छ । यसको लक्ष्य कम्युनिस्ट केन्द्र बन्दै अगाडि बढाउने थियो, यसलाई विभाजन समेत गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरू पनि छन, सत्ताका लागि । तैपनि नेतृत्वमा ‘चील गति’ लिने व्यक्तिको विचारले स्थान पाएका कारण सम्भावित दुर्घटनाहरू टरिरहेका छन । यस अर्थमा यो गति लिने नेता ‘प्रचण्ड’ हुन । उनका कमीकमजोरी हुन सक्छन तर नेतृत्व र कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना र व्यवस्था परिवर्तनको नयाँ ढाँचाको आन्दोलनको नेतृत्व प्रचण्डबिना सम्भव भएको थिएन, त्यसको प्रमाण हो– मसी नसुकेको शान्ति सम्झौतामा ‘प्रचण्ड’ नाममा भएको हस्ताक्षर ।
राजनीतिमा निक्कै कठिन गोरेटो र दोबाटो आउनु अस्वभाविक होइन । विश्व कम्युनिस्ट राजनीतिको चरित्र पनि यस्तै थियो । शताब्दिहरूमा कसको भूमिका के रह्यो र कम्युनिस्ट आन्दोलन विश्वमा कसरी सफल वा विफल भयो भन्ने चर्चाका लागि घनश्याम भुसाल जस्ता विद्वानका पुस्तकमा रुमल्उिँला । अहिले, नेकपाको यो गति र बेगको नेतृत्व, देशमा भएको शान्ति सम्झौताको मर्मको नेतृत्वको चर्चा गर्दा त्यसका ‘ड्राइभर’ प्रचण्डभन्दा अर्को भेटिने तथ्य र आधार छैनन । त्यसैले त भनिन्छ– एउटा चीललाई बेगले पनि सम्मान गर्छ, बेग बिजेता मान्छ उसको क्षमता र रफ्तार देखेर ।
पक्कै पनि ३० बर्षको नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा नेकपाको पुनस्र्थापनाका लागि प्रचण्डको त्यो गतिलाई मापन गर्दा अनिवार्य छैन तर मान्नुपर्नेचाहिँ ‘उनी बेग बिजेता चील हुन ।’
राजनीति, पुस्तकभित्रको सिद्धान्तको व्याख्यामा हुँदैन । समाजका स–साना इकाईमा रहेका अनेक सर्वसाधारणको मस्तिष्कमा चेतना, अधिकार, संघर्षको मैदानमा उत्रिने आत्मबल दिने व्यक्तिसँग हुन्छ । जन–जनलाई मर्न या मार्न ९अधिकारका निम्ति० तयार पार्ने वैचारिक लडाईको नेतृत्व, त्यसको उठान र सरल अवतरणको पनि नेतृत् वगर्न सक्ने प्रचण्डको अदभूत कला र क्षमतालाई ‘नेकपा’ वर्गले नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । बरु, उनीसँग इतिहासमा कम्युनिस्ट आन्दोलन, रणनीति र त्यसको नेतृत्वको शिक्षा लिनुपर्छ । जसले सत्तामा पुग्नुमात्र उपलव्धी हेरेनन, सत्तामा पुराउन सक्ने अदभूत क्षमता प्रदर्शन गरे । नेता सत्ताको नेतृत्वको लोभमा कति लालयित छ भन्ने चीजलाई व्यवाहारत देखाईदिए कम्युनिस्ट विचारकै लाइनमा हिँडेका वा विपरित सिद्धान्तको नेतृत्व गरेका भए पनि । यसको उदाहरण अहम् मौकामा उनले प्रधानमन्त्रीका लागि बाटो खोलेका र बनाएका– माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवाका सरकार हुन् । यी ति प्रमाण पनि हुन, जसलाई हाम्रै पुस्ताले राम्रोसँग विश्लेषण गर्ने मौका पायो ।
पत्रकार बिजयकुमार पाण्डेले केही बर्ष अघि प्रचण्डसँग लिएको अन्तरवार्ताका क्रममा एउटा प्रश्न यस्तो आशयमा गरेका थिए– तपाईमा पुष्पकमल दाहाल र प्रचण्डका दुई भूमिका छन । यो नामको बिम्ब के हो ?
प्रचण्डको जवाफ थियो– मभित्र दुवैथरी छ । क्रान्ति उठान, राजनीतिक परिवर्तन र आन्दोलनका निम्ति प्रचण्ड र देशमा शान्ति प्रक्रिया, राजनीतिक स्थिरता र उन्नत नेपालका निम्ति पुष्पकमल दाहाल यी दुवै गुण भए जस्तो लाग्छ ।
प्रचण्ड, राजनीतिक आकाशका त्यस्ता बेग बिजेता हुन जसले दरबार छिरिसकेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फरक हिसाबले डोहोराउनका लागि दरबार नै भत्काइदिए, घर–घरमा कम्युनिस्ट बनाइदिए । उदाहरणका लागि स–साना सामाजिक इकाईदेखि संघीय सरकारसम्मलाई मत दिने जनताको विश्वास पर्याप्त छ । त्यसैको परिणामको आधार हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी । अनि, त्यसले ल्याएको नजिकको दुई तिहाई । यो आधारलाई, यो धरातललाई बिर्सेर कोही मोही माग्ने तर ढुंग्रो लुकाउने काम गरिरहन्छन भने प्रचण्डको गति कसरी अघि बढ्छ भन्ने आँकलन मुस्किल हुन सक्छ । उनको राजनीतिक उडानको तीन दशकमा देखिएका उतारचढावको पृष्ठभूमी विश्लेषणका निम्ति सन्दर्भ सामग्री हुन सक्छ ।
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अरु नेताको पनि योगदान छन । ति योगदानका कथा र चर्चा अस्वभाविक होइनन । स्थिर कम्युनिस्ट सदस्य कायम राख्नका लागि उनीहरूले देखाएका भूमिका चर्चाशुन्य हुँदैन । तर नेतृत्व भन्ने चिज चलायमान र गतिशील हुनुपर्छ भन्ने उदाहरणीय बन्न सक्नुपर्छ । समकालिन राजनीतिक व्यवस्था, त्यसलाई पर्न सक्ने असर र भावी दिनको कार्ययोजनामा सफलता प्राप्त गर्नका निम्ति भिजन आवश्यक हुन्छ । जो–जसलाई आफ्ना कुर्सीका अनेक खुट्टाको कमजोरी र सबलताको ज्ञान मात्र हुन्छ त्यो नेता हुनै सक्तैन । राजनीतिको अन्तिम सत्य सत्ता हुन सक्छ तर सत्ताको अन्तिम सत्य के हो त ? जनाधार बलियो राख्ने गति होइन र ?
यसर्थ, यो लेखकको नीजि विचार भएकाले भन्नैपर्छ– नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको समग्र नेतृत्व प्रचण्डलाई दिनु उचित हुन्छ । उनी सहर छिर्दा पहिलो बने, हन्डर खाए । लगभग उनको विचारलाई विभाजित बनाउनका लागि अनेक चोइटा भोगेका थिए । तर जोड्दै गए त्यसले आकार लियो । त्यो आकारले अहिले एउटा आँधी ल्याउन सक्ने जनमत पायो, एउटा केन्द्र निर्माणमा योगदान दिए । उनीबाट कम्युनिस्ट कार्यकर्ताले कक्षा लिएको राम्रो हुन्छ । यस अर्थमा उनकै भाषामा भन्न सकिन्छ– उनको नेतृत्वमा हिँडेको पार्टी चील नै हुन्छ । दैनिकनेपालबाट